Ndingayitshintsha njani iphasiwedi yam? – LifeWorks
IsiXhosa Afrikaans አማርኛ العربية Azərbaycan Bosanski Čeština Dansk Deutsch Ελληνικά English (AU) English (CA) English (GB) English (US) Español Español (Latinoamérica) Eesti Suomi Français (Canada) Français (France) עברית हिंदी Magyar Italiano 日本語 한국어 Bahasa Melayu नेपाली Nederlands Norsk Polski Português Português do Brasil Română Русский Slovenščina Soomaali svenska Kiswahili ไทย Tagalog Українська Tiếng Việt 简体中文 中文 (香港) 繁體中文
Ndingayitshintsha njani iphasiwedi yam?
Ukuba uyilibele iphasiwedi yakho, ungacofa ku 'Iphasiwedi Ilityelwe' ecaleni kwebhokisi yokufaka iphasiwedi kwiphepha lokungena. Uza kucelwa ukuba ufake idilesi ye-imeyile obhalise ngayo kwi-LifeWorks. Siza kukuthumelela ilinki yokuseta iphasiwedi.. Xa ucofa kuyo iza kuvula iphepha elitsha kwibrawza yakho, apho unokufaka khona iphasiwedi entsha.
Ukuba sele ungenile kwi-LifeWorks kodwa ungathanda ukuba nephasiwedi entsha, ungayihlaziya ngokusebenzisa iiSetingi > iiSetingi zeAkhawunti > Tshintsha Iphasiwedi, okanye landela le linki. Ukuze wenze iphasiwedi kuza kufuneka uqale uqinisekise le unayo.
Nceda uqaphele ukuba nangona usenokutshintsha iphasiwedi yakho ibrawza yakho kusenokwenzeka igcine le indala. Xa uphinda ungena kwakhona qinisekisa ukuba uzicima zonke iiphasiwedi esele zifakiwe uze uyichwetheze ngokwakho le intsha
Nceda uqinisekise usebenzisa iibrawza ezisebenzelana newebhusayithi yethu (U-Chrome, Firefox, Safari kunye no-Internet Explorer 11) uze ucime nakuphi ukungena kwi-intanethi kwabucala.